27 Apr 18, 05:56 AM
kyaw lin tuj: ဆရာတော်ဘုရား တပည့်တော် ဆရာတော်ဘုရား၏ပြောကြားမူခဲ့သော
6 Mar 18, 07:39 PM
mr4nders0n: where can I get information regarding the history and truth regarding the muslim problems in rakhine IN ENGLISH I do not trust the western media, where I live crimes by muslims are covered up and I am
18 Feb 18, 10:32 PM
lwin moe oo: ဆရာတော်တရားတော်တွေကို download ချင်လို့ပါဘုရား
18 Feb 18, 10:29 PM
lwin moe oo: ဆရာတော်တရားတွေကို download ခိ၏်၏၏
18 Feb 18, 10:27 PM
lwin moe oo: ဆ
10 May 17, 07:43 PM
Saw Yan Naing: ဆရာတော် တရားဟောခွင့် ပိတ်ခံထားရ ပါသလား။ အင်တာနက်မှာ ရှာမရတော့ဘူး?
12 Jan 17, 05:25 AM
Thida: sayardaw's contact no# ရချင်ပါတယ်..ဆရာတော်ကို..ဘယ်မှာ..သွားဖူးနိုင်ပါလဲ
28 Aug 16, 09:25 AM
naing lin aung: download မရလို့ ပါဗျ
28 Aug 16, 08:59 AM
naing lin aung: I am so very glad you.
15 Apr 16, 09:30 AM
Sayadaw next trip ?: Can you tell me Sayadaw next trip in May 2016. i want to listen Sayadaw speak. i admire him very much.
10 Apr 16, 05:40 PM
kyaw: need it dama
10 Apr 16, 05:39 PM
9 Feb 16, 03:29 AM
BCBG Sydney: တင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တပည့်တော်၏ အီးမေးမှာ bcbgsydney@gmail.com
BCBG Sydney: ဆရာတော်၏ တရားတော်များကို တရားသိစေခြင်းအတွက် ရည်ရွယ်ကာ တင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၅ တွင် ဆရာတော်တေ်ာ ဟောကြားသောတရားများကို ပြည်ပတွင် တရားနာနိုင်ရန် ခက်ခဲခြင်းအတွက် တရားသိစေရန် ရည်စူးကာ အင်တာနက်တွင်
9 Feb 16, 03:18 AM
BCBG Sydney: ဆရာတော်၏ တရားခွေများကို မြန်မာပြည်မှ ၀ယ်ူကာ မိမိတို့ blog and youtube တွင် တင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်၊
9 Feb 16, 03:15 AM
BCBG Sydney: ဆရာတော် ခွင့်ပြုချက် ပေးပါရန် ရိုသေစွာ လျှောက်ထားအပ်ပါသည် ဘုရား
9 Feb 16, 03:14 AM
BCBG Sydney: ဆရာတော်၏ ၂၀၁၅ တရားတော်များကို တပည့်တော်၏ blogspot and youtube တွင် တင်ခွင့်ပြုပါရန် ရိုသေစွာ လျှောက်ထားအပ်ပါသည်၊ 2016 နှစ်ဦးပိုင်းက ဆရာတေရားတော်၏ တရားတချို့ကို ဆရာတော်ထံ ခွင့်ပြုချက်မယူမိဘဲ တင်ထားမိပ
12 Nov 15, 03:58 AM
မောင်လူလေး: တရားတော်တွေ မတင်ပေးတော့ဘူးလားဘုရား
12 Nov 15, 03:33 AM
မောင်လူလေး: ဆရာတော် ဘုရား ကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင့် သာသနာ့ အကျိုးကို စထက်တပိုး ထမ်းရွက်နိုင်ပါစေ..
18 Aug 15, 12:48 PM
Admin:: ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလ(ဒယ်အိုး) (၁၈.၈.၂၀၁၅)အင်္ဂါ နေ့ နံနက်ခင်း ထိုင်းနိုင်ငံ (တောင်ပိုင်း) မြန်မာမိသားစုများ ဆွမ်းကပ် ခြင်းနှင့်အလှူတော်ကပ်လှူခြင်း (သြဝါဒပေး)